Notification No. 40/2011
Finance & Revenue'S Notifications One Stop Service ဖွငျ့ နစေ့ဥျ ဆောငျရှကျပေးမှုမြား
Myanmar Company Top
ကုမ္ပဏီများ ဖွဲ.စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုး တင်ပြခြင်းများအား (၃) နာရီအတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးမှု အခြေအနေ
ကုမ္ပဏီများ ဖွဲ.စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုး တင်ပြခြင်းများကို One Stop Service ဖြင့် ဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိရာတွင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလျှင် (၃) နာရီထက် မကြာဘဲစိစစ် ဆောင်ရွက်ပေး လျှက်ရှိရာ (၃-၉-၂၀၁၂) မှ (၇-၉-၂၀၁၂) ကာလအတွင်းဖွဲ.စည်းမှတ်ပုံတင်သောကုမ္ပဏီ (၁၁၃) ခု နှင့် သက်တမ်းတိုးတင်ပြသောကုမ္ပဏီ (၉၉) ခုကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဖွဲ.စည်းမှတ်ပုံတင်သည့် ကုမ္ပဏီ အရေအတွက်
သက်တမ်းတိုးတင်ပြသည့် ကုမ္ပဏီ အရေအတွက်
One Stop Services ဖြင့် (၃-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် ဖွဲ.စည်းမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း စဉ်
လာဗင်ဒါ ဒိုင်းမွန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
LAVENDER DIAMOND COMPANYLIMITED TRADING ၂
မေလီလဲ့ အင်တာနေရှင်နဲလ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
MELILEA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED TRADING ၃
အေစီတီ အင်ဂျင်နီယာရင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
A C T ENGINEERING COMPANYLIMITED CONSTRUCTION
ရွှေပိုက်ဆံ ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
GOLDEN MONEY SERVICES COMPANYLIMITED SERVICES ၅
ဟဲ ပလဲနင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
HAL PLANNING COMPANYLIMITED SERVICES
ကောင်းဝင်းလာဘ် အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
KAUNG WIN LUCK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED INDUSTRY
ယူနီတီ စထရဲန့် သ်ဂရုပ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
UNITY STRENGTH GROUP COMPANY LIMITED CONSTRUCTION
ဒက္ခိဏ အင်ဂျင်နီယာများနှင့်တည်ဆောက်သူများ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
DAKKHINA ENGINEERS & CONSTRUCTORS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED CONSTRUCTION
မြန်မာပလဲရှား အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
MYANMAR PLEASURE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED CONSTRUCTION
မင်းနိုင် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
MIN NAING CONSTRUCTION COMPANYLIMITED CONSTRUCTION
မြတ်ပန်းပွင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
MYAT PANN PWINT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED CONSTRUCTION
ကြယ်ရောင် အမ်ဂျီကေ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
STAR LIGHT M G K CONSTRUCTION COMPANY LIMITED CONSTRUCTION
PYI THEIN KYAW COMPANYLIMITED TRADING
သစ်လွင် အောင်ခန့် မင်း ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
THIT LWIN AUNG KHANT MIN CONSTRUCTION COMPANY
AUNG LON GEMS COMPANYLIMITED GEMS ၁၆
ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေး ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
MARITIME SUPPORT SERVICES COMPANY LIMITED SERVICES
WIN SHWE YI MIN TUN (MYANMAR) TRADING COMPANY LIMITED TRADING
မြတ်ရွှင်ရွှင်လန်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
MYAT SHWIN SHWIN LANN TRAVELS & TOURSCOMPANY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- One Stop Services ဖြင့် (၃-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
လမင်းသခင်မ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် MOON PRINCESS COMPANY LIMITED Trading
ရွှေစင်လမင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် SHWE SIN LA MIN COMPANY LIMITED Trading
မိုးဇေယျာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် MOE ZAYAR COMPANY LIMITED Gems
အောနက်(စ်)တီ ဘရားသား(စ်) ထရောင်းဒင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
HONESTY BROTHERS TRADING COMPANY LIMITED Service
မြန်မာ အကောင်းဆုံး အထောက်အကူပြု ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် MYANMAR BEST SUPPORTING SERVICES COMPANY LIMITED Service
စည်းလုံးခြင်း ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် BE ONE TRADING COMPANY LIMITED Trading
One Stop Services ဖြင့် (၄-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် ဖွဲ.စည်းမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း စဉ်
ဟောရိုင်ဇုန် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
လူ့ စွမ်းအား နည်းပညာ လမ်းညွှန် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
HUMAN POWER TECHNIC GUIDE COMPANY LIMITED
ထူးခြားသာလွန်ဟိုတယ် အုပ်ချုပ်မှု စနစ် ဖြေရှင်း ခြင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
UNIQUE HOTEL MANAGEMENT SYSTEM SOLUTION COMPANY LIMITED
ဖျူးခြားလင်း(န်)မြန်မာ ကေအမ်ဂျီ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
FUTURE LAND MYANMAR (K M G) CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
အော်တိုတော့ပ် ပါဝါ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
AUTO TOP POWER COMPANY LIMITED SERVICES
တိုင်းထက်အောင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
TAINN HTET AUNG COMPANY LIMITED
တမောတျာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
TA MAW TYAR TRADING COMPANY LIMITED
ထွန်းနဂါး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
TUN DRAGON MINING COMPANY LIMITED
ကယားဌာနီ သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
KAYAH HTARNI MINING COMPANY LIMITED
ဆန်းတက်ပါဝါ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
SUNTAC POWER COMPANY LIMITED
အေးရှပစိဖိတ် အေပရယ်ကော်ပိုးရေးရှင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
ASIA PACIFIC APPAREL CORPORATION COMPANY LIMITED
ပူစီ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
PUCCI COMPANY LIMITED
တော့(ပ်) လိုက်(ဖ်)စတော့ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
TOP LIVESTOCK COMPANY LIMITED
အိတ်(ခ်ျ) ကေ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
H K COMPANY LIMITED
ရိုင်ရယ် ၀မ်းဂိတ်ဝေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
ROYAL 1 GATEWAY COMPANY LIMITED
ရွှေမိုးမြေကျော် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
SHWE MO E MYAE KYAW COMPANY LIMITED
ပထမဇူလိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
FIRST JULY COMPANY LIMITED
ရွှေပျားတောင် စက်မှုလက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
SHWE PYA TAUNG INDUSTRY LIMITED COMPANY LIMITED
INDUSTRY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- One Stop Services ဖြင့် (၄-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
ကိုအောင်ဝင်းနှင့်မိသားစု ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
KO AUNG WIN & FAMILY COMPANY LIMITED
မြစ်ကြီးယမုံနာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
GREAT YAMONA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
ထာဝရအင်အားစု ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
EVER STRONG GROUP COMPANY LIMITED
အပြာရောင်မြစ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
BLUE RIVER TRADING COMPANY LIMITED
သူရိယ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
THURIYA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
နဝရတ်နည်းပညာ ဆက်သွယ်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
NAWARAT LINK ENTERPRISE COMPANY LIMITED
ဆီဇာပလာဇာ ဟိုတယ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
CAESAR PLAZA HOTEL COMPANY LIMITED
စိန်နှင့်စန်းထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
SEIN & SAN MANUFACTURING COMPANY LIMITED
ထွန်းသစ်စ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
EMERGENT INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
ရာဇ တံခွန် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
YAZA TAGON COMPANY LIMITED
ကံကောင်းသော ငွေကြယ် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
LUCKY SILVER STAR TRADING COMPANY LIMITED
One Stop Services ဖြင့် (၅-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် ဖွဲ.စည်းမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း စဉ်
TUN & FRIENDS HOTEL COMPANY LIMITED HOTEL ၂
GLOASIA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
INTERNATIONAL ROAD STAR TRADING COMPANY LIMITED TRADING
MAY KHA VENTURE HOLDING COMPANY LIMITED
YE MIN TUN COMPANY LIMITED SERVICES ၆
MYANMAR TRAVELS LINK COMPANY LIMITED
MULTI NATION TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED TRAVELS ၈
သည် နက်ဝပ်(ခ်)ဟပ်(မြန်မာ) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
THE NETWORK HUB (MYANMAR) COMPANY LIMITED
CIVILTREE ADVATECH COMPANY LIMITED INDUSTRY
FLOWERY LAND TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED
HEIN HEIN KYAW CONSTRUCTION COMPANY LIMITED CONSTRUCTION ၁၂
ထွန်းရတနာအောင် ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
TUN YADANAR AUNG GEMS COMPANY LIMITED GEMS ၁၃
MYANMAR DARUMA INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED
JUNIOR STAR TRADING COMPANY LIMITED
TRANS OCEAN MARINE SERVICES COMPANY LIMITED SERVICES
TAUNG MYINT WON YAN COMPANY LIMITED
LIN KHANT THEIN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
တီပီအယ်လ် မြန်မာဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
T P L MYANMAR SERVICES COMPANY LIMITED SERVICES
LOTUS WORLD GROUP TRADING COMPANY LIMITED TRADING
MYA THIDA AUNG SOE SOE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
SU PANN HTWAR MANUFACTURING COMPANY LIMITED INDUSTRY
CHAN MYAE SOE SAN MINING COMPANY LIMITED
ဇက်ကေကေတီအထွေထွေ ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
Z K K T GENERAL SERVICES COMPANY LIMITED SERVICES
NEW NAY LA WINN COMPANY LIMITED SERVICES ၂၅
HSENG SIRI COMPANY LIMITED
CENTRAL KEYSTONE COMPANY LIMITED
TAING HTET TUN TRADING COMPANY LIMITED
PYONN PYONN LAY INTERNATIONAL TRAVEL & TOURS COMPANY LIMITED TRAVEL ၂၉
KYAW MOE WIN TRAVEL & TOURS COMPANY LIMITED TRAVEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- One Stop Services ဖြင့် (၅-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
မြန်မာတံခွန် ခရီးသွားလာရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
BANNER OF MYANMAR TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED
မြန်မာကိုင်ဒို ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
MYANMAR KAIDO COMPANY LIMITED
မြန်မာ စက်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
MYANMAR MACHINERY MANUFACTURING COMPANY LIMITED
ချယ်ရီပွင့် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
CHERRY PWINT TRADING COMPANY LIMITED
ပလပ်စတစ် ဝါးလ် လီမိတက်
PLASTIC WORLD LIMITED
ပင်လယ်ကွေ့ သင်္ဘော စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
ကမ္ဘာ့ ပင်လယ် ကုန်သည် လီမိတက်
GLOBAL SEA TRADER LIMITED
One Stop Services ဖြင့် (၆-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် ဖွဲ.စည်းမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း စဉ်
MOE PYAE TUN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED CONSTRUCTION
NEW EVER LIGHT COMPANY LIMITED SERVICES
LS STRATEGIC HOLDING LIMITED SERVICES
SHWE PA KHET MINING COMPANY LIMITED INDUSTRY
STAR ZONE TRAVEL & TOURS COMPANY LIMITED TOURS
MYINT THIRI SAN COMPANY LIMITED INDUSTRY ၇
DECO ART COMPANY LIMITED CONSTRUCTION
JADE FAMILY GEMS COMPANY LIMITED GEMS ၉
SOLUTIONS GATEWAY COMPANY LIMITED SERVICES
ယူနီဗာဆယ်လ် ကွန်မြူနီကေးရှင်း(စ်)အဲန်ဒ်ဆားဗစ်(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
universal communications and services COMPANY LIMITED SERVICES
NGWE KYEI PYAE SON COMPANYLIMITED TRADING
လပ်(ခ်)ဒါဒါ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
LUCK DA DA TRADINGCOMPANY LIMITED TRADING
SHWE MOE THEIM COMPANY LIMITED INDUSTRY
SHWE SEIN MYINT MOH TRADINGCOMPANY LIMITED TRADING
MIN YAZAR AUNG CONSTRUCTION COMPANYLIMITED CONSTRUCTION ၁၆
KUN PHE'T REGION DEVELOPMENT TRading COMPANY LIMITED TRADING
ဒိုင်းမွန်းမေဆမ် အင်ဒတ်စ်ထရီးစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
DIAMOND MAYSON INDUSTRIES COMPANY LIMITED INDUSTRY
ကိုရန်နိုင် လော်ဂျစ်စတစ် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
KO YAN NAING LOGISTICS COMPANY LIMITED SERVICE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- One Stop Services ဖြင့် (၆-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
မြင်တွေ့ အမြန် ခရီးသွားလာရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် EUREKA EXPRESS TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED Tourism
အိမ်မက် ကုန်းမြေ ခရီးသွားလာရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် DREAM LAND TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED Tourism
ဟန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အုပ်စု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် HAN INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED Service
ရွှေရှာသူများ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် GOLD FINDERS COMPANY LIMITED Industry
သက်ရောက်ရောင်စဉ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် SPECTRUM IMPACT COMPANY LIMITED Trading
ကောင်းမြတ် ထုတ်လုပ်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် KAUNG MYAT MANUFACTURING COMPANY LIMITED Industry
သီဟသန့် ဟိန်း သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် THIHA THANT HEIN MINING COMPANY LIMITED Industry
စက်ဝိုင်းထိမျဉ်း ရေလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
TANGENT MARINE SERVICES COMPANY LIMITED
အမျိုးသား ကြီးပွားတိုးတက်ရေး ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
NATIONAL PROSPERITY GEMS COMPANY LIMITED Gems
ပြိဿရာသီ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် TAURUS TRADING COMPANY LIMITED
တောင်မိုးရေ အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် TAUNG MOE YAE GENERAL TRADING COMPANY LIMITED
ကျော်ချမ်းသာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် KYAW CHAN THAR TRADING COMPANY LIMITED
ထွန်းသီရိရတနာ သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် TUN THIRI YADANAR MINING COMPANY LIMITED
One Stop Services ဖြင့် (၇-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် ဖွဲ.စည်းမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း စဉ်
ဆက်ပ်ဆက်စ် ပွိုင့်ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
SUCCESS POINT SERVICES COMPANY LIMITED
AMAZING ORIENTAL TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED
THUDRA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
AYEYAR ZWEMARN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
ဧကရာဇ် နဂါးရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
IMPERIAL DRAGON TRADING COMPANY LIMITED
ZINO TECH SERVICES COMPANY LIMITED
HANTHARWADDY DYNASTY TRAVELS & TOURS COMPANY LIMITED
YUPA7AUTOMOBILE COMPANY LIMITED
AYEYARZAR ONE FIVE COMPANY LIMITED
DEMO TRADE INTERNATIONAL LIMITED
MOE SET PWINT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
SWAM ARR ELECTRONIC LIMITED
CITY CAB COMPANY LIMITED
တီတီအိတ်(စ်)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
TTH INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED TRADING
YATI MYANMAR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
အနာဂတ်တံခါး ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
FUTURE DOOR T RADING COMPANY LIMITED TRADING
FUTURE DOOR COMPANY LIMITED
ချမ်းမြေ့ကမ္ဘာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
CHAN MYAE KABAR TRADING COMPANY LIMITED
KYAUK SEINN AH HLA GEMS COMPANY LIMITED GEMS
သဘာဝအလှ ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
THA BA WA AH HLA GEMS COMPANY LIMITED
SHWE SIN MYANMAR COMPANY LIMITED
ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ဘ၀ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်
HEALTHY & HAPPY LIFE TRADING COMPANY LIMITED
ကာ့စ်တ်ကဲန်ဆလ်ထ်တင်း (မြန်မာ) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
CAST CONSULTING (MYANMAR) COMPANY LIMITED SERVICES
စိမ်း ၀င်းခိုင် ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလီမိတက်
SEIN WIN KHAING GEMS COMPANY LIMITED
SAI & SONS MANUFACTURING COMPANY LIMITED
U M S SERVICES COMPANY LIMITED SERVICES
MYANMAR GOLDEN ADVICE SERVICE COMPANY LIMITED
DOE KHITT SAN TRAVEL & TOURS COMPANY LIMITED
မက်ဇင်၏ ၀ိုင်းထရေးဒင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်
MAXIM'S WINE TRADING COMPANY LIMITED COMPANY LIMITED
MYANMAR F D I CONSULTANCY COMPANY LIMITED
SERVICES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- One Stop Services ဖြင့် (၇-၉-၂၀၁၂) နေ.တွင် သက်တမ်းတိုးမှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
ကေသရာဇာ နှလုံးသား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Lion Heart International Trading Co., Ltd.
ရတနာပြည့်ဖြိုးအောင် သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Yadanar Pyi Phyo Aung Mining Co.,Ltd.
မြစ်ဖျားဧရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Myit Phyar Ayer International Co., Ltd.
အောင်ထွဋ် ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Aung Htut Gems Co.,Ltd.
ရတနာပြည့်ဖြိုးအောင် ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
Yadanar Pyi Phyo Aung Gems & Jewellery Co.,Ltd.
ဆန်းသစ်နန်းထိုက် အထွေထွေရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
New Nan Htike General Trading Co.,Ltd.
စည်းလုံးခြင်းသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ လီမိတက် Be One Mining Co.,Ltd.
ကြယ်နီမြန်မာအုပ်စုကုမ္ပဏီ လီမိတက် Red Star Myanmar Group International Co.,Ltd.
န၀ရတ်တော်ဝင် ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Nawarat Taw Win Trading Co.,Ltd.
မြန်မာမျိုးဆွေ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Myanmar Myo Swe Co.,Ltd.
စိန်ကြယ်လမ်းအုပ်စု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Diamond Star Way Group Co.,Ltd.
ကောင်းစိုးစံရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Kaung Soe San Trading Co.,Ltd.
စိန်ဝင်းလျှံ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Sein Win Hlyan Co.,Ltd.
မြစ်ကြားရိုးမ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် Delta Yoma Trading Co.,Ltd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- « Back
Copyright © 2005 Ministry of National Planning and Economic Development. All rights reserved. Designed By MIT Pte. Ltd.